Ama-Shawls kunye namaqonga ayimfuneko yokubusika emangalisayo yamantombazana enhle. Ukungazivumeli kwiifowuni kunye ne-snob kwizinto eziqhelekileyo kunye nokufudumala, uboya obunzima obukhulu kunye neenkonkco ezinamaqhina banako ukuguqula ngokubanzi umfanekiso, obongeza imibala eqaqambile kuyo. Iidrawls ezimnandi ezinemihlobiso yobuhlanga zigqwesa kakhulu kwisitayela esithi "la Rus".
Ikhekhe likaPavloposadsky liyingcaciso ebalulekileyo yengubo yasebusika
Nangona kunjalo, i-palatine enobuncinci neyinkathazo ininzi kakhulu: ingaba yingubo-poncho okanye uhlobo lwejekethi phezu kwekhati okanye i-blouse, gxiba kwelinye ihlombe ngendlela yeScottish kilt okanye ukwakha ingubo e-oriental style.
Iingqungquthela zomgca ezimbini zivumela ukuba udale umthamo obalaseleyo
I-shawl ngesimo se-pelerine yindlela efanelekileyo yokukhusela intamo kunye ne-décolleté kwiqhwa nomoya. Ufuna nje ukwenza i-double loop, udlulise umgca owodwa we-kerchief uze ulungise umgca kumagxa akho. Iinguqulelo elula "i-cowboy handkerchief": i-stele ephotshwe ngecandelwana kufuneka ixutywe ngamaxesha amaninzi entanyeni ize ibeke iiphelo kwiincoko.
I-Shawl "ibhathaneli" - ukukhuselwa okuthembekileyo kumelene ne-blizzard
Iqhosha le "Cowboy": lilula kwaye lihlelekile
"Ikholeji emibini" yindlela elula yokukhawuleza nayiphi na inqabana imizuzu emininzi. I-Shawl kuphela kufuneka iphose entanyeni kwaye ibophe iiphelo. Emva kokwenza "ezisibhozo", gxiba "isandi" sesibini uze ulungise ihlunu ephumayo.
"Ijoka" ekhethiweyo - enye indlela efanelekileyo yokunyusela
Indlela yokukhetha ingubo kwintombazana ephakamileyo
UFicus Benjamin - ukunakekelwa ekhaya
Casserole nge broccoli
I-Technique yokulahla imikhwa emibi
Amaqhawe amaninzi awabukeleyo
AmaSandwich nge caviar kunye neentlanzi
Umquba we-pie kunye neklabishi
I-lettuce yamanzi: iipropati kunye nezicelo zamachiza
UCtor Victor Kosykh
Yintoni eyofana nesimo sezulu eSt. Petersburg ngoSeptemba 2016, ngokwezinto ezichazwe kwiziko le-Hydrometeorological Centre. Ukuphononongwa ngabakhenkethi malunga nemozulu kwaye bahlala eS Saint Petersburg